Abiy Ahmed oo sheegay in ciidamada fedeeaalka Itoobiya ay la wareegeen deegaamadii Oromada iyo Soomaalidu ku dagaalameen – Madal Furan
Hoy > Warka > Abiy Ahmed oo sheegay in ciidamada fedeeaalka Itoobiya ay la wareegeen deegaamadii Oromada iyo Soomaalidu ku dagaalameen
Abiy Ahmed oo sheegay in ciidamada fedeeaalka Itoobiya ay la wareegeen deegaamadii Oromada iyo Soomaalidu ku dagaalameen
Adis Ababa (Madal Furan) – xaaladda DDSI ayaa iminka ah mid degan iyadoo markii ugu horeysay uu ka hadalay Ra’iisal wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed fadqalaladii ka dhacday dhex martay ciidamadda Federaalka Itoobiya iyo kooxo caraysan oo diidanaa faragelinta ciidamadda Federaalka Itoobiyaa.
Raysal Wasaare Abiy oo war ka jeediyey xaaladda iminka ay ku sugan yihiin goobihii dhibaatadu ka dhacday ayaa sheegay in ciidamada fedeaalka Itoobiya ay amniga goobahaas gacanta ku dhigeen iyadoo ay sii socon doonto wadahadalka xasiloonida lagu raadinayo.
Raysal wasaare Abiy Ahmed oo ku sugan magaaladda Addis Ababa ayaa dadweynaha ugu baaqay in ka feejignaadaan warar uu ku sheegay been abuur oo laga faafiyey dhulka ay dhibaatadu ka dhacday.
Waxaa weli magaaladda Addis Ababa ka socda wadahadalka u dhexeeya Dowladda Fedeeraalka Itoobiya iyo masuuliyiintii xukuumadii Madaxweynihii is casilay Cabdi Iley.
Ra’iiusl Wasaare Abiy Axmed ayaa sheegay in Ciidamada Federaalka Itoobiya ay si buuxda gacanta ugu hayaan deegaamadii ay horay ugu dagaalameen qowmiyadaha Oromada iyo Soomaalida, isla markaasna si dhaqso leh loo furi doono wadahadal iyo gar naqsi u dhexeeya cuqaasha beelahaas dagaalamay.
wuxuu kaloo iftiimiyey inuu rajo fiican ka qabo in si buuxda looga gun gaari doono nabad buuxda oo lagu soo dabaalo colaada ugubka ah ee u dhexeysa Soomaalida iyo Itoobiya, wuxuuna ka codsaday Labada dhinacba inay dejiyaan xaaladda si nabadgelyo loogu wada noolaad.
Saameynta heshiiska Itoobiya iyo Eriteriya ku yeelan karo dekeddaha Jabuuti iyo Somaliland.